Email Newsletter Monetization: Sarudzo Dzinogona Kuita dzeBloggi neMicrosoft Vaparidzi
Kufuridzira hakuchisiri iyo yakasarudzika domain yevakuru vaparidzi. Maziso eziso uye kushambadzira madhora ari kuendeswa kune uto revashoma, vashoma niche vaparidzi; vangave ivo vanogutsikana curators, blogger, vlogger, kana podcasters.
Tichifunga nezvekuwedzera kwekudiwa, izvi zvidiki-vaparidzi vari kutsvaga nzira dzekufunga zvine musoro kubva kune vateereri vavo, uye nesimba ravo.
Batsira muemail Tsamba
Pamwe pamwe nedzimwe nzira dzekuita mari dzavanoshandisa parizvino, senge webhusaiti inoratidza kushambadzira uye rutsigiro rwemagariro enhau, vaparidzi vemazuva ano vane sarudzo mbiri dzinoyemurika dzekuita mari yavo tsamba dzetsamba.
Kuita mari kwezvinhu zvemuparidzi zveemail hazvisi zvitsva asi kusvika nguva pfupi yadarika paive nezvipingamupinyi, senge hushoma runyorwa saizi, yaisabvisa vaparidzi vadiki kubva mukutora chikamu.
Sezvo a yakazara sevhisi email yekushambadzira agency nechido chekushambadzira, isu tashandisa nzira dzinoverengeka kubatsira mabloggi kuti akure yavo email mari - pasina kutengesa zvakananga kana kuwedzera basa ravo. Heano maviri edu epamoyo.
Ads muemail Tsamba
Isu takaona izvo zvinoratidza kushambadzira, zvakaputirwa mukati kana kutenderedza maemail, mutambi akasimba anoenderana nemutengo; kune vashambadziri nevaparidzi zvakafanana.
Martech Zone inoshandisa imwe yeakakura email mawebhusaiti ad, LiveIntent, kuita mari mugwaronhau rayo.
Hacker Nhau, iyo inoburitswa na Kale Davis, akarova LaunchBit kuisa zvine simba mushambadziro mumwechete mutsamba yega yega. Kale anoshandisa MailChimp semubatsiri wake weemail inosanganiswa neLaunchBit; kugadzira kushambadzira kushoma uye jekiseni otomatiki.
Mukutaura, Dan Lewis ne Zvino Ndinoziva inoratidza kushambadzira kwakawanda mutsamba yake. Dhani anoshandisa LiveIntent pamwe neLaunchBit. Ose ari maviri anowirirana zvine mutsindo neake email sevhisi webasa.
Sponsored Emails (aka Email Chinyorwa Rental)
Iyo email rondedzero rendi nzvimbo yachinja mumakore achangopfuura, kuti ive nani. Usandibata zvisirizvo, kuchine hoards yemakambani erondedzero ari kuroja, kana kutotengesa, asingabatsiri email zvinyorwa asi ichokwadi zvakare kuti chaiyo email rondedzero rondedzero inoramba ichiita musimba akasimba. Kunyangwe zvakadaro, akawanda evaparidzi vadiki vanozeza kunyange kufunga nezveemail rondedzero rendi senzira yekuita mari.
Zvichida imhaka yekuti vaparidzi ve niche vane hukama hwepedyo, hwehukama nevavanonyorera uye havadi kuita sevanobatsira. Zvimwe ndiko kusanzwisisa kwe ndedzipi rondedzero kwazvo zvinosanganisira.
Kana kuti pamwe zvinongova zvinyadzo zvezita zvinodzima vaparidzi vatsva. Panzvimbo pe "email list rental" isu tagara tichitumidzira seMatsigiro Akatsigirwa kana Emairi Akazvitsaurira ayo, tichifunga kuti mupi wemushambadzi unowanzo kuputirwa muvaparidzi email template, inokodzera.
Heino yakatsigirwa email kubva DailyWorth; chinyorwa chinopa matipi anoshanda pamari yako wega mazuva ese kuvakadzi. Mumuenzaniso uyu mushambadzi iShoeMint.
Pazasi pane muenzaniso kubva kuna Wilson Web, uyo anoburitsa Webhu Kushambadzira Nhasi tsamba yekutsva ine ecommerce, email kushambadzira, uye webhusaiti kushambadzira matipi. Mushambadzi ndiLyris, email yekutengesa sevhisi.
Mune ruzivo rwangu, yanhasi email emaimeri manejimendi makambani anoita basa chairo rekumisikidza vashambadzi niche vateereri. Iyo tekinoroji uye musika wakafambira mberi zvakare uchibvumira mushambadzi, kana yavo yemazita bhuroka, kubvarura zviri nyore zvinyorwa, kuita mishandirapamwe, uye kuyedza kuita.
Ndeapi ari mabasa eMuparidzi?
Email inoratidzira netiweki uye eemail rondedzero dzekuhaya makambani anoita kuti tsambambozha monetization ive nyore kune vaparidzi. Kubva pakutsvaga nekutengesa kusvika pakuzivisa uye kubhadhara, ivo vakanyanya kuzviita zvese.
Basa remuparidzi rinoenderera rinogumira pakusarudza / kubvumidza kushambadzira / zvinopihwa uye nekuenderera mberi nekuita vanyori vavo.
Zvakawanda Sei Zvinotarisirwa Nemuparidzi Kuita?
Email Ratidza Ads -Email inoratidzira kushambadza inowanzo kutengwa pane yekuita base, senge mutengo-wega-kudzvanya kana mutengo-per-fungidziro, saka chiyero chinonyanya kushandiswa pakuronga uye kuverenga mari inoshanda mutengo-pa-chiuru kana eCPM. eCPM inoverengwa nekuparadzanisa mibairo yakazara nenhamba dzese dzekuratidzwa muzviuru. Paakabvunzwa nezveavhareji eCPMs, Elizabeth Yin, Co-muvambi weLaunchBit, anoti "kune zvakawanda zvakasiyana, kubva pamadhora mashoma kusvika pamadhora zana eCPM (pavhura)." Anoenderera mberi achiti "tsamba dzakanakisa dzinofarira Thrillist, vanotengesa zvinhu zvavo, vanowana mari inosvika kumadhora mazana maviri nemakumi manomwe nemashanu zvichienderana nemhando yemashambadziro. ”
Tsamba Dzakatsaurirwa -Maemail akazvitsaurira anowanzo kutengwa pane mutengo-pa-chiuru hwaro, kana CPM, zvichireva kuti vaparidzi vanogashira mari yakati sandara yezviuru zvese zveemail zvakatumirwa, pamwe nemari yekuwedzera kune chero kunongedzwa kwakumbirwa nemushambadzi. Mubhadharo hauna kusungirirwa mukuita, zvisinei, mashoma masheedzero anoita anokurumidza kudonhedzwa nechero rondedzero kambani inokoshesa munyu wavo. Maemail akazvitsaurira ari kuenzanisa $ 80- $ 250 CPM, maererano neWorldata Nyora Mutengo Index. Zvichienderana nenhamba dzazvino kubhadhara kweemail yakatsaurirwa kana kutsigirwa kwakakura kudarika maemail ekuratidzira kushambadza, asi vaparidzi vanofunga vanozosarudza nemameseji avanotumira; saka pane mikana mishoma yekubatsirwa kubva kuemail rondedzero
Revenue Splits -Ose maviri maemail anoratidza ad netiweki uye eemail runyorwa makambani ekuhaya anoshanda pane yekuita hwaro; zvichireva kuti hapana muripo kune muparidzi, pachinzvimbo vanongogovera mari inowanikwa kubva kune mushambadzi. Semuenzaniso, neemail rondedzero yekurenda, muparidzi anochengeta 50% -80% yeese rondedzero yerevhizheni odha. Mari yemari yakakamurwa yeemail inoratidza ads, zvisinei, zvakati omei kupinha pasi.
Tora woenda nazvo
Kana vateereri vako vari kudiwa zvakanyanya, iwe unogona uye unofanirwa kupihwa mari yekuwana kwazviri. Iwe unogona kugara uchitengesa yako email hesera iwe pachako, asi ruzivo rwakandiratidza kuti iwe ungangodaro uchagamuchira mari shoma apo uchishandira zvakaoma kune iyo. Kunyanya mune email rondedzero yekurenda nzvimbo.
Kana muparidzi mudiki achinyatso kushambadza ivo pachavo, zvinonyanya kudikanwa pachave nezvazvo zvemukati. Izvo zvinozo fambisa runyorwa kukura, izvo zvavanogona kuita mari zvakananga uye zvisina kunangana, zvisinei kana vakasarudza kushandisa yakatsigirwa kushambadzira, anotsigirwa maemail, kana chero imwe nzira.
Ini ndinoti, vaparidzi vakabatikana vanogona kuve zvirinani kusiya mari isina kunangana kune nyanzvi uye kuyedza matekiniki ese evateereri. Iwe unoti kudini?
Tags: Email Marketingkutangaliveintentmutsikisi
Uchishandisa Yemagariro Media Kukura Yako Inotevera Chiitiko
Apr 18, 2012 pa 7: 23 AM
Ndiri kuvandudza tsamba yangu yekutanga uye urwu ruzivo rwakanaka kwandiri kuti ndishandise. Ndatenda.